स्यानिटाइजर किन्दा यी ३ कुरा ध्यान दिनू « Mayadevi Online News Portal
स्यानिटाइजर किन्दा यी ३ कुरा ध्यान दिनू
प्रकाशित मिति : २५ भाद्र २०७७ बिहीबार ०६:३५
के तपाईले बजारमा स्यानिटाइजर किन्नु भएको छ वा किन्न जानु लाग्नु भएको छ । यदि तपाई स्यानिटाइजर किन्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईले ध्यान दिनै पर्ने तीन कुरा छन् ।
स्यानिटाइजरबारे नेपालमा कुनै विस्तृत अनुसन्धान त भएको छैन तर मुख्य नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागले गर्दै आएको निरीक्षण अनुगमनमा कतिपय गुणस्तरहीन हुनसक्ने पाइएको छ। त्यसैले हामी बजारमा गएर स्यानीटाइजर किन्दै छौ भने हामीले अब खासगरी तीनवटा विषयमा ध्यान दिनस पर्ने छ ।
अल्कोहलको मात्राः कुनै पनि स्यानिटाइजर किन्दा त्यसको लेबल हेरेर त्यसमा अल्कोहलको मात्रा ७०-८० प्रतिशत भएको खण्डमा मात्र किन्नुपर्छ ।
दर्ताः नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भए वा नभएको पहिल्याउनुपर्छ ।
रुपरसः झट्ट हेर्दा खेरि नै त्यसमा अन्य मिसावट भए वा नभएको निर्क्योल गर्नुपर्छ ।
कम उमेरमै कपाल फुलेर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी घरमै गर्नुस्…
एजेन्सी ।उमेर बढ्दै गएपछि कपाल फुल्नु सामान्य हो । आजकल
एजेन्सी ।मोटोपनाका कारण मानिसहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् । शरीर
किन खाने बोक्रासहितको स्याउ ? यी हुन् ८ कारण
काठमाडौं ।नेपाली बजारमा स्याउ जुनै महिनामा पनि सहजै पाउन सकिन्छ